အသက် ၄၆ နှစ် (ကိုရီးယားအသက်) ရှိပြီဖြစ်တဲ့ အဆို​တော်/ ​entertainer Kim Jong Kook ဟာဆိုရင် မကြာ​သေးခင်က သူ့ရဲ့ ၁၉၇၆ ခုနှစ်ဖွား သူငယ်ချင်း​တွေိနဲ့အတူ SBS ရုပ်သံလိုင်းရဲ့ “Dolsing Fourmen” အစီအစဉ်မှာ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ ဒီလို စု​ဝေး​နေတုန်းမှာ Kim Jong Kook က သူ့ရဲ့ သူငယ်ချင်းအုပ်စုထဲမှာ သူသာလျှင် လက်မထပ်ရ​သေးတဲ့ လူလွတ်တစ်​ယောက်ဖြစ်ပြီး တခြားသူငယ်ချင်း​တွေက သူ့ကို အားကျ​နေကြတယ်ဆိုတဲ့အ​ကြောင်းကို စ​ပြောခဲ့ပါတယ်။
ထိုအခါ မင်းသား Cha Tae Hyun က “အခုဆိုရင် ငါသူ့ကို အိမ်​ထောင်ပြုဖို့​အ​ကြောင်း ဟကိုမဟ​တော့ဘူး။ အားလည်းမ​ပေး​တော့ဘူး။ ဒီအရွယ်ကြီးကြမှ အိမ်​ထောင်ပြုဖို့လို​​သေးလို့လား” ဆိုပြီး ပြန်တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ​ကြောင့် Kim Jong Kook ကလည်း သူဘာ​ကြောင့် လက်ထပ်ချင်ရလဲ​ဆိုတဲ့ တကယ့်အ​ကြောင်းအရင်းကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
သူက “ငါ့ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က လူအားလုံးက မင်းအသက်ကြီးလာ​လေ ပိုပြီး အထီးကျန်လာ​လေ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ ဒါ​ကြောင့် လက်ထပ်သင့်တယ်ဆိုပြီး ​ပြောကြတယ်” လို့ ​ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး “ငါ အသက် ၅၀ မပြည့်ခင် ကျိန်း​သေ လက်ထပ်မှာပါ” ဆိုပြီး​တော့လည်း ​ပြောခဲ့ပါ​သေးတယ်။
အဲ့ဒီအခါ မင်းသား Cha Tae Hyun က “ငါတို့ ​နောက်နှစ်ဆိုရင်ပဲ အသက်က ၄၇ နှစ် (ကိုရီးယားအသက်) ပြည့်ပြီ။ ဒါက ဖြစ်​ရောဖြစ်နိုင်လို့လား? ဒါက မင်း ​နောက်နှစ်ထဲမှာ တစ်​ယောက်​ယောက်နဲ့ တွဲကို တွဲရမယ်လို့ ဆိုလိုတာပဲ။
Jong Kook ရဲ့ အကျင့်စရိုက်အရ သူက တစ်​ယောက်​ယောက်ကို ၂ နှစ် ၃ နှစ်​လောက် တွဲပြီးမှ လက်ထပ်မှာပဲ။ လာမယ့် ၃ နှစ်အတွင်း လက်ထပ်ဖို့ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ရဲ့လား ငါ​တော့ မသိ​တော့ပါဘူး” လို့ ပြန်​လည်​​ထောက်ပြ​ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီ​နောက် Kim Jong Kook က “ဟင့်အင်း ငါအဲ့အချိန်​လောက်ကြရင် တကယ်လက်ထပ်မှာ။
လူ​တော်​တော်များများက လက်ထပ်ပြီးသွားတဲ့အခါ တစ်ယ​ောက်ရဲ့ ပြဿနာကို တစ်​ယောက်က မြင်လာကြတယ်လို့ ​ပြောကြတယ်မလား? ငါ​တော့ အဲ့ဒါကို နားမလည်ဘူး။ အမှန်​တော့ ဒီကိစ္စက လွယ်လွယ်​လေးပဲ​မဟုတ်လား။ ကိုယ့်ရဲ့ မိန်းမ လုပ်ချင်တာကို ကိုယ်က လိုက်လုပ်​ပေးရုံပဲ​လေ။ ငါ့အတွက်​​တော့ တစ်ခုပဲလိုတယ်။
ငါ အားကစားလုပ်ချင်တဲ့အချိန်မှာ ​​ပေးလုပ်မယ်၊ အားကစားလုပ်တာကို မတားဘူးဆိုရင် သူမ ဘာ​ပြော​ပြော အကုန်လိုက်လုပ်​ပေးမယ်” ဆိုပြီး ​ပြတ်ပြတ်သားသားပဲ ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ Kim Jong Kook ရဲ့ ဒီစကား​ကြောင့် ဟာသသရုပ်​ဆောင် Kim Jun Ho က​တော့ အားပါးတရရယ်ပြီး “မင်းနဲ့ လိုက်ညိှပြီး​နေဖို့ လွယ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါ​ပေမဲ့ မင်းက ကပ်​စေးနဲတယ်​လေ။
အရာရာမှာ ​ချွေတာလွန်းအားကြီးတယ်။ မင်းရဲ့ မိန်းမက အဲ့အချက်​ကြောင့် အဆင်​ပြေမှာမဟုတ်ဘူး” လို့ ​ဆိုပြန်ပါတယ်။ တစ်ဖန် Kim Jong Kook ကလည်း “ဟင့်အင်း အဆင်​ပြေမှာပါ။ ဘာ​ကြောင့်လဲဆို​​တော့ ငါမှန်တယ်လို့ ထင်တဲ့အရာ​တွေကို လုပ်လိုက်ဖို့ ငါ့ရဲ့ မိန်းက​လေးကို​တော့ ဖိအား​ပေးမှာ မဟုတ်ဘူး” ဆိုပြီး ပြန်လည်​ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
Kim Jong Kook တစ်​ယောက်က​တော့ အိမ်​ထောင်ပြုဖို့ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်က ခိုင်မာ​နေပြီဖြစ်​သလို ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုလည်း အပြည့်ရှိ​နေတာကို ​တွေ့ရပါတယ်။ မိန်းမဖြစ်သူကိုလည်း အရာရာ နားလည်သည်းခံပြီး လိုက်​လျော​ပေးမယ့်ပုံပါပဲ။ သူငယ်ချင်း​တွေကသာ လူပျိုသိုးကြီးဆိုပြီး ဝိုင်းနှိမ်​နေကြ​ပေမဲ့ Kim Jong Kook က​တော့ အခုတည်းက လက်ထပ်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားတဲ့ မိန်းက​လေး​တောင် ရှိ​နေပြီလား မသိပါဘူး​နော်။
Photo : SBS, Instagram
Next Debut ခဲ့ပြီးနောက် Jeongyeon နဲ့ Jihyo တို့ နေ့တိုင်းငိုခဲ့ကြတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်အကြောင်းအရင်း »
Previous « ချစ်သူ Luhan ရဲ့ သစ္စာရှိမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ Guan Xiaotong ရဲ့ ယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့ အဖြေတစ်ခု
AMA မှာ သမိုင်းသစ်​ရေးထိုးပြီး နိုင်ငံ့ဂုဏ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ BTS အတွက် ဂုဏ်ပြုစကားဆိုခဲ့တဲ့ သမ္မတကြီး Moon Jae In